मन्त्रालयका सचिव माथि स्वकीय सचिवको हातपात प्रयास !::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
मन्त्रालयका सचिव माथि स्वकीय सचिवको हातपात प्रयास !
प्रकाशित मिति - बुधबार, जेष्ठ ९, २०७५
सुर्खेत, ९ जेठ । कार्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात प्रयास भएकाे छ ।
द्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री नन्दसिंह बुढाका स्वकीय सचिव डम्वर बुढासहितका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात प्रयास गरेकाे बताइएकाे छ।
बुधबार कार्यकक्षमै स्वकीय सचिव बुढा, जगत सिंह, हरिप्रसाद तिवारीलगायतले सचिवमाथि हातपात प्रयास गरेका हुन्। प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरेर केही समयपछि छोडेको थियो।
सचिव झाले मन्त्रीका स्वकीय सचिव बुढासहितका केही युवाहरुले मदिरा सेवन गरेर आफूमाथि हातपात गर्न खोजेको बताए । ‘मेरो सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र बन रक्षकका जमदारले बाहिरबाट ढोका बन्द गरेकाले ठूलो घटना हुन पाएन्’ उनले भने, ‘कार्यकक्षबाट बाहिर निस्कन पनि असुरक्षा महशुस भइराखेको छ ।’
बैशाख १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगुको रारातालबाट सुरु गरेको कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रममा व्यक्तिगत रकम खर्च भएको भन्दै स्वकीय सचिव बुढाले सचिव झासँग रकम माग्ने गरेका थिए । उनले ‘अनियमित रकम’ दिन नमिल्ने बताएपछि युवाहरुलाई ल्याएर आफूमाथि कुटपिट प्रयास भएको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी श्यामसिंह चौधरीले सचिव झाले आफूमाथि हातपात हुन लागेको जानकारी गराएपछि प्रहरी टोली पठाएर तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘पक्राउ परेकाहरुले हातपात नभएको बताएपछि हामीले छोडेका छौं’ डिएसपी चौधरीले भने।